Portrait mode နဲ့ Mention sticker Feature ၂ ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Instagram! – AsiaApps
April 11, 2018 April 11, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Portrait mode နဲ့ Mention sticker Feature ၂ ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Instagram!
Instagram ဟာ Portrait mode camera နဲ့ Mention Sticker feature ၂ ခုကို My Stories အတွက်ထည့်သွင်းမိတ်ဆက်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့ကမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။
Instagram ရဲ့ My Story မှာ Portrait mode camera ကိုအသုံးပြုချင်ရင်တော့ “Superzoom” ရဲ့အရှေ့က “Focus” ဆိုတဲ့ Option ကိုနှိပ်ပြီး အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ Instagram ရဲ့ version ဟာနောက်ဆုံးထွက် 39.0 ဖြစ်နေမှသာ Focus option က နေတဆင့် Portrait mode camera ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Portrait mode ကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာတင်မဟုတ်ပဲ ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာပါ Support ပေးပါတယ်။ နောက်ခံကဝါးနေပြီး ကိုယ့်ရုပ်ကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပြီဆိုတော့ ရှယ်ပါပဲ။ Focus option ကို iPhone 6S ကစတင်ပြီး နောက်မျိုးဆက်သစ် iPhone တွေအားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ iPhone SE မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်တယ်ဗျ။ Android အတွက်ကတော့ Device အချို့မှာသာအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
My Story မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ပုံ တင်ဖြစ်ရင် အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Instagram acc တွေကို My Story မှာပဲတစ်ခါတည်း Tag (Facebook ဝေါ်ဟာဒဖြင့်) တွဲနိုင်ပြီနော်။ Tag (or) Mention ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း နာမည်အရှေ့မှာ “@” ခံပြီးလုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ။ Instagram ရဲ့ 39.0 version မှာပါဝင်တဲ့ Feature အသစ်နှစ်ခု ဟာ Normal user တွေအတွက်တော့ သာမာန်ဖြစ်ပေမယ့် My Story အသုံးများတဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ feature တွေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာက…. Instagram 39.0 version ရဲ့ Bug လို့ပဲဆိုရမလားပဲ… Focus option လေးဟာတစ်ခါတစ်လေကျရင် ပြောက်နေတတ်ပါတယ်။ App ထဲကထွက်ပြီး ပြန်ဝင်လိုက်မှသာ ပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ (တစ်ခါတလေပါ.) Feature အသစ်တွေခံစားအသုံးပြုချင်ကြတဲ့ Instagrammer တွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့ Instagram version ကိုမြှင့်တင်ကြဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
Update (or) Download link – Android/ IOS